Dr Saacid ” Hiigsashadeena iyo qorshaheena cad ayaa u gudbinaynaa Caalamka” - iftineducation.com
Dr Saacid ” Hiigsashadeena iyo qorshaheena cad ayaa u gudbinaynaa Caalamka”
iftineducation.com – Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federaaliga ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdon “Saacid” ayaa maanta la kulmay una hambalyeeyay guddi hawleedka qorshaha New Dealka ama Hiigsashada Cusub, gudigan oo loo yaqaan “High Level Task Force”.
“Duruufta maanta dalka ka jirta waa mid loo baahan yahay in wax badan laga badalo, horumar weyna laga sameeyo; qorshan hiisashada cusubna muhiimad gooni ah buu u leeyahay horumarka aan doonayno,” ayuu yiri Ra’iisal Wasaaruhu asagoo isla mar ahaantaana si weyn ugu mahadceliyay guddiga hawsha waday. “Hambalyo ayaan idin leeyahay, waana idin garab taaganahay.”
Ra’iisal Wasaaraha ayaa sheegay in dawladdu leedahay qorshe dib-u dhis iyo horumarineed oo ay doonayso inay dalka ka hirgaliso. Waxaana uu dhanka kale cadeeyay in dawladdu shirka Brussels hordhigi doonto baahida dalka iyo siday u kala mudan tahay.
“Waa muhiim inaan baahideena iyo siday u kala mudan tahay u sheegno bulshada caalamka iyo saaxiibadeena doonaya inay dib-u dhiska dalka naga caawiyaan,” ayuu yiri Ra’iisal Wasaaruhu. Waxaana uu sheegay inay laga maarmaan tahay in il-gaar ah lagu fiiriyo baahiyaha kala duwan ee deegaanada dalka oo dhan.
Kulanka Ra’iisal Wasaaruhu la yeeshay guddiga hawlwadeenada qorsha Hiigsiga Cusub ama New Dealka ayaa yimid kadib markii shalay uu si rasmi ah magaalada Muqdisho uga furmay kulankii wada tashiga qiimaynta nugaylka iyo baahida Soomaaliya. Kulankaan ayaa shalay ka dhacay xarunta gobolka Banadir, waxaana lagu wadaa in kulamo wada tashi oo lamid ahi ay ka dhacaan magaalooyinka Baydhabo iyo Garowe inta ka horeysa 16 Sebteembar ee uu dhacayo shirka Brussels. Hadafka guud ee kulamadaan laga leeyahay ayaa ah in si wada-jir ah loo qeexo nugaylka iyo baahida dalka, ayadoo lagu hamiyayo sidii Soomaaliya loo gaarsiin lahaa horumar dhaxal-gal ah.
Nin kashifey sirtii Maraykanka Edward Snowden oo magangalyo weydiistey Ruushka
DAAWO VIDEO: Kana Jawaab Su’aasha Madaxwaynaha KHAATUMO State Kayiri, Shirkii Nairobi ee Shakiga Dhaliyey (Top)